I-Cloud Gaming ku-Linux | Kusuka kuLinux
I-Cloud Gaming ku-Linux
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | I-UseLinux yeFayileLet
I-Cloud Gaming noma umdlalo ku-Cloud uyipulatifomu entsha yokudlala eyakhiwa kwi-intanethi, ngaleyo ndlela isuse umgoqo wobuchwepheshe ukuze ukwazi ukudlala ngaphandle kwamandla edivayisi esiyisebenzisayo, sizodinga kuphela umkhawulokudonsa neklayenti sixhuma kule sevisi.
Lokhu kungumnikelo ovela ku-Ainus, ngaleyo ndlela ube ngomunye wabaphumelele emncintiswaneni wethu wamasonto onke: «Yabelana ngalokho okwaziyo ngeLinux«. Halala!
Amaphrojekthi afana no-Onlive no-gaikai abelokhu enikeza okuningi okuzokhulunywa ngakho isikhathi eside, kangangoba uSony uthenge iGaikai ukunikela ngalolu hlobo lwenkundla yokudlala kuma-consoles ayo, i-PC, ama-Tablets kanye nomakhalekhukhwini, yize lokhu kungenye indaba. Ukuqonda ukuthi umdlalo usebenza kanjani emafini kulula kakhulu, cabanga ukuthi une-PC enamandla kakhulu nomdlalo ofakiwe futhi owenzelwe ukusebenza ngekhwalithi ephezulu yezithombe, manje ake ucabange ukuthi uxhuma nge-inthanethi ukuze uwudlale ukude kusuka kuthebhulethi yakho, iselula ifoni noma i-PC enesizotha ngaphandle kwamandla amaningi ethola izithombe zomdlalo ngokusakazwa sengathi yividiyo ye-YouTube.
I-Onlive iklayenti lokudlala lamafu eline-akhawunti yamahhala ekuvumela ukuthi ufinyelele kuzinsizakalo zakho bese uzama imidlalo kumodi yesilingo noma yedemo, uma uqinisekile ukuthi ungathenga izihloko ezithile noma ukhokhe imali yenyanga ukuze udlale imidlalo oyifunayo.
Lapho sesichazile ukuthi kuyini nokuthi kusebenza kanjani, sizobona indlela yokufaka iklayenti le-Onlive ku-Linux nge-PlayOnLinux.
Ungayifaka kanjani i-Onlive usebenzisa i-PlayOnLinux
Isinyathelo 1 - Faka i-PlayOnLinux
Uma ungenayo i-PlayOnLinux efakiwe, funa indlela yokuyifaka ngokuya nge-distro yakho, ngisebenzisa i-Linux Mint 14 / Ubuntu 12.10 njengoba kuzoba kanjena.
sudo apt-get ukufaka playonlinux
Isinyathelo 2 - Ukufaka nokulungisa i-Onlive
Lapho i-PlayOnLinux isifakiwe, sizoyisebenzisa ukuze sifake futhi silungiselele iklayenti.
Sichofoza isithonjana Faka.
Sibhala enjini yokusesha online ukuze sithole iphrofayili ukuyifaka. Ngemuva kwalokho siyachofoza Faka.
Chofoza ku- Okulandelayo futhi sizomisa iyunithi entsha ebonakalayo ngokuzenzekelayo.
Siyakhetha Landa uhlelo futhi sinikeza Okulandelayo.
Ukufakwa kwamakhasimende manje kuzoqala. Khetha ibhokisi ukwamukela imigomo bese uchofoza kuyo Okulandelayo.
Inothi lokufaka: Ngesikhathi senqubo yokufaka iklayenti ungacelwa ukuthi ufake ama-add-on njengeMono noma ufake i-gecko phakathi kwezinye izinto, noma yini esikisela ukuthi uyifake.
Kungakubuza ukuthi imemori khadi yakho inememori engakanani. Ngibeke u-1024 ngoba ngicabanga ukuthi yilokho okwami, uma ungazi ukuthi kunamalini, sesha imodeli yakho yehluzo ku-Google ukubona imininingwane.
Qhafaza Okulandelayo uma usukhethe ukuthi unamalini.
Ngokuzenzakalelayo, iphrofayili yokufaka ye-Onlive ikhetha uhlobo oludala lweWayini (1.5.21) olungasebenzi ngomsindo; Isixazululo silula kakhulu. Ukufaka inguqulo yesimanjemanje yeWayini, ku-PlayOnLinux kulula kakhulu ukuyenza, mane uchofoze inkinobho ethi "Lungiselela".
Uma ukhetha iphrofayili ye-Onlive uzobona leli windi lapho likutshela khona ukuthi usebenzisa yiphi iwayini. Yebo, chofoza inkinobho + (ezungezwe yindilinga ebomvu emfanekisweni).
Njengoba ngisebenzisa i-64bit distro ngikhetha ithebhu amd64, uma i-distro yakho ibiyi-32bits ubungakhetha ithebhu x86.
Manje sibheka inguqulo 1.5.27 bese siyifaka ngenkinobho ">". Kuzoqala ukufaka futhi uma yonke inqubo isiqedile ungavala lelo windi.
Manje khetha inguqulo 1.5.27 bese uvala iwindi. Usunayo iklayenti le-Onlive elilungiselelwe nge-PlayOnLinux, manje sekusele kuwe kuphela ukudala i-akhawunti neklayenti.
Ungakha i-akhawunti yamahhala kusuka kuklayenti ngenketho dala i-Akhawunti Yamahhala.
Njengombhalo wokugcina kufanele ngicacise ukuthi iklayenti lingakhombisa umyalezo
isexwayiso mayelana nokubambezeleka noma ngamadivayisi angatholakali, kepha angamaphutha azolungiswa nakanjani kuzinguqulo zakamuva zewayini.
Njengesampula, isithombe sedeskithophu yami sisebenzisa i-Unreal Tournament III ku-inthanethi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-Cloud Gaming ku-Linux
Amazwana ayi-5, shiya okwakho
UJosue Aquino kusho
Ungafaka i-OnLive yezinketho ze-laptop nemodi ye-wifi
Uhlala engitshela lokho kepha okungenani unginika ithuba lokuthi "ngiqhubeke"
PS: Asivumelane ukuthi singadlala umdlalo ndawonye! 😀 I batusa Ekhaya!
Phendula uJosue Aquino
Sengivele ngisebenzise i-OnLive, iqiniso libe yiphini lami lenyanga xD
futhi ngifaka nje iwayini futhi liyasebenza. Kuhlolwe ku-Arch, manjaro, debian, fedora naku-ubuntu.
Bengingazi onlive futhi ngiyayithanda i-xDD !!
Ngizamile imidlalo ethile kumenzi wami wekhofi futhi angikholwanga ukuthi ngiyidlalile lapho 😮
U-Alexander Bilstein kusho
Ngiyifakile kepha uma ngiyisebenzisa ngithola umyalezo wephutha le-latency futhi okuwukuphela kwenketho enginika yona ukuphuma.
Ngabe ukhona owaziyo ukuthi ingaxazululwa kanjani?
Phendula u-Alejandro Bilstein
U-Antonio Gutierrez kusho
Akunjalo neze, ukudlala kusuka ewayinini kungukukhwabanisa, bathwala iklayenti eselivele liyi-OSX, ukushintsha iskripthi se-bash se-executable. Angiphumi… ngibakhokhele uma bengenayo iklayenti lengxenyekazi yami.
Phendula u-Antonio Gutierrez
UDebian Wheezy uzokhishwa ekuqaleni kukaMeyi
I-Fluxreader: Enye indlela yami ecacile ye-Google Reader